जापानको समर फेस्टिभलमा खान लायक 12 प्रकारका ग्रिल स्ट्रीट फुड | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > जापानको समर फेस्टिभलमा खान लायक १0 प्रकारका ग्रिल स्ट्रीट फुड
याकिमोनो (पोलिएको) खाना जापानीहरु निकै मन पराउछन। यहाँ धेरै प्रकारका याकिमोनो पाईन्छ। यदि हजुर गर्मि महिनामा जापान आउदै हुनु हुन्छ भने पक्कै पनि स्ट्रीट फेस्टिभल घुम्ने मौका पाउनु हुनेछ। जापानको यी फेस्टिभलको मुख्य आकर्षण फेस्टिभलमा राखिने स्ट्रीट फुड पनि हो। फूड स्टललाई जापानीमा याताई भनिन्छ। याकी भनेको ग्रिल, फ्राई अथवा पोलिएको खाना हो। साधारणतया याकीमा मासु, माछा, सब्जीहरु पर्दछन। हामी हजुरलाई आज १० खानै पर्ने गर्मीका स्ट्रीट फुडको जानकारी गराउने छौ।
१. साकाना शियोयाकी (魚塩焼き)
जापान एक टापू भएकोले यहाँ सीफुडको भरपुर आनन्द लिन सकिन्छ। यहि प्रचुरताका कारण मानिसहरुले यी खाना तयार गर्ने थुप्रै रेसेपी बनाएका छन्। माछाको थुप्रै रेसेपी भएतापनि याताईमा सजिलै पाईने खाना हो साकाना शियोयाकी। यो कोइला माथि ग्रिल गरिएको माछा हो। माछालाई बासको सिन्कामा उनिएको हुन्छ। यसमा नुन बाहेक अरु मसला केहि हालिएको हुदैन। धेरै जसो प्रयोग गरिने माछा आयु माछा हो।
2. २. इकायाकी (イカ焼き)
इका भनेको स्क़ुईड हो। इकायाकी भनेको चाही पोलेको स्क़ुइड हो. इकायाकी धेरै जसो सोया सस र मायोनेज संग खाईन्छ। स्क़ुइडको टेण्टाकल र बडि छुट्टा छुट्टै पोलिन्छ। यो पनि सिन्कामा उनिएको हुन्छ। दुवै निकै मिठो हुन्छ। यदि हजुरले फुड स्टलमा इकायाकी देख्नु भयो भने पक्कै पनि खानु होला।
3. ३. एबी-शियोयाकी (海老塩焼き)
अर्को सिन्कामा उनिएको परिकार हो एबी शियो याकी। एबी भनेको ठुलो खालको प्रन (prawn ) हो। एबी शब्दले प्रन, लब्स्टर र श्रीम्पलाई जनाउछ. यो इकायाकी भन्दा अलि महँगो हुने भएकोले याताईमा खासै राखिन्न। टाउको सम्म मजाले पोलिएको हुनाले यो पुरै खान मिल्छ।
४. याकितोरी (焼き鳥)
यो मेरो फेब्रेट याकिमोनो हो। तोरी भनेको चरा हो. तर खानामा तोरी भन्दा चिकेनलाई जनाईन्छ। याकीतोरी धेरैको मन पसन्द खाना हो। याकितोरी सानो सानो साईजको कुखुराको मासुलाई सिन्कामा उनेर तयार गरिन्छ। यो शियो (नुन) वा तारे (सस) दुई किसिमको हुन्छ। गजबको कुरा के छ भने याकितोरी मा प्रयोग गरिने मासु एकै खालको हुन्छ. त्यसैले याकितोरीको बेग्लै बेग्लै नाम हुन्छ। केहि नाम तल दिईएका छन्.
मोमो – चिकेन थाई , सेसेरी – घाटीको मासु , बोनजिरी- पिधको मासु, नानकोचु- कुरकुरे हाड, रेबा – कलेजो, हाचु – मुटु, खावा- छाला, सुनागीमो – घट्ट
५. याकीतोन (焼きとん)
याकीतोन भनेको चाही पोलेको पोर्क हो। यसलाई बुताकुशी पनि भनिन्छ। यसकोनि थुप्रै प्रकार हुन्छ. कारुबी, कासिरा र हारामी मलाई मनपर्ने बुताकुशिको प्रकार हुन्। बुताकुशी शियो भन्दा पनि तारे संग बढी मनपराउछन।
६. याकीतोमोरोकोशी (焼きとうもろこし)
यो भनेको पोलेको मकै हो। यो प्राय जसो गर्मि महिनाको फेस्टिभलमा राखिन्छ। मकैलाई सोया सस वा नुनमा ग्लेज गरिन्छ। जापानको स्विट कर्न निकै मिठो हुन्छ। यदि हजुरलाई अलि स्पाईसि मन पर्छ भने जापानिज सिचिमी (एक किसिमको धुलो खोर्सानी) हाल्न सक्नु हुनेछ।
याकीसोबाको स्वाद नेपाली चाउमिन संग निकै मिल्न जान्छ। यो एककिसिमको फ्राई नुडल हो। यो नुडल पोर्क र सब्जी संग फ्राई गरेर तयार गरिन्छ। सिजनिंग चाहि याकिसोबा सस, नुन र पेपर हालेर गरिन्छ। यो सजिलै संग घरमा पनि तयार गर्न सकिन्छ। तर फुड स्टलको खान निकै रमाईलो हुन्छ. यसको टपिंग मयोनेज र नोरी (जापानी सी विड) हालेर पनि खाईन्छ.
८. ओकोनोमियाकि (お好み焼き)
ओकोनोमियाकि एक किसिमको प्यान्केक हो। यो सब्जी (बन्दा र हरियो प्याज ) अनि मासुको स्लाईस वा सिफ़ुड हालेर बनाईन्छ। यसको सुरुवात ओसाकाबाट भएको हो। तर यो जापानको जहाँ कहिँ पाईन्छ। पिठोको ब्याटर हालेर पकाईने यो खानाको टपिङ्गको लागि मायोनेज, खाचुओबुशि (बोनितो फ्लेक)र नोरी प्रयोग गरिन्छ।
९. ताकोयाकी (たこ焼き)
ताको भनेको अक्टुपस हो। ताकोयाकी पनि पिठोको ब्याटरमा अक्टोपस्को मासुको टुक्रा राखेर बनाईन्छ। यो जति मिठो हुन्छ त्यति नै बनाएको हेरन मजा आउछ। सा-सानो खाल्टो परेको भाडोमा ब्याटर हालेर चलाई चलाई गोलो आकार दिईन्छ। यो पनि मयोनेज , ताकोयाकी सस र बोनितो फ्लेकको टपिंग राखेर खाईन्छ।
ताई एक किसिमको माछा हो। तर यो ताईयाकि भनेको पोलिएको माछा भने होइन. यो जापानी स्ट्रिट डेजर्ट हो।यसलाई जापानी वाफल भन्दा पनि हुन्छ। ब्याटर बाट बनाइने यो, ताई माछाको आकारमा कुदिएको साचोमा पाईन्छ। यो भित्र गुलियो रेड बिन पेस्ट वा कस्टर्ड हालिएको हुन्छ। अहिलेत माच्या, चल्क्लेट पनि फिलिंग को रुपमा प्रयोग गरिन्छ। तर सजिलै पाईने भनेको रेड बिन पेस्ट फिल गरिएको ताईयाकि हो।
माथि दिईएका यी १० यकिमोनो निकै अथेण्टिक जापानी खानेकुरा हुन्। समरमा स्ट्रिट फेस्टिभल भै रहने जापानमा हजुरले यी खाने कुरा लिने मौका पाउनु भयो भने पक्कै खानु होस्। यी खाने कुराहरु त्यति महँगो पनि हुदैनन्। ओमाचुरीको मजा लिदै खानाको स्वादपनि लिनु होस्।